Lisitry ny lisitra ecommerce: ny farany tsy maintsy haves amin'ny fivarotana an-tserasera | Martech Zone
Alakamisy, Jona 29, 2017 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Iray amin'ireo lahatsoratra malaza indrindra nozarainay tamin'ity taona ity ny fanatontosana anay lisitry ny lisitry ny lisitry ny tranonkala. Ity infographic ity dia fanarahana mahafinaritra avy amin'ny masoivoho lehibe iray hafa izay mamokatra infografika tsy mampino, MDG Advertising.
Iza amin'ireo singa e-varotra e-commerce no zava-dehibe indrindra amin'ny mpanjifa? Inona no tokony hifantohan'ny marika, ny fotoana, ny angovo ary ny teti-bola amin'ny fanatsarana? Mba hahalalana izany dia nijery fanadihadiana marobe izahay, tatitra momba ny fikarohana ary taratasy ara-pianarana. Avy tamin'io famakafakana io dia hitantsika fa ny olona manerana ny faritra sy ny zoro rehetra dia manome lanja hatrany ireo endri-javatra tranokala vitsivitsy ihany rehefa miantsena an-tserasera. Inona no tadiavin'ny mpanjifa amin'ny tranokala E-Commerce
Ny valin'ny fikarohana sy fanadihadiana nataon'izy ireo momba ny matihanina dia nahitana sokajy lehibe 5 izay mandeha amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ny orinasan'ny ecommerce amin'ny fitarihana fahatsiarovan-tena, fahefana ary fiovam-po. Nanampy ireo ankafiziko tsy azoko tamin'ny valin'ny fanadihadiana aho.
47% amin'ireo mpanjifa no milaza fa ny fampiasana sy ny fandraisana andraikitra no singa lehibe indrindra amin'ny tranokala e-commerce
Speed - ny tranokala ecommerce dia tokony ho haingana. Mpividy 3 amin'ny 4 no nilaza fa hamela tranokala e-commerce izy ireo raha miadana ny fametrahana azy
intuitive - Ny fivezivezena, ireo singa sarety iraisana, ary ny fiasa amin'ny tranokala dia tokony ho mora hita sy ampiasaina.
manaiky - 51% ny Amerikanina rehetra no mividy amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny finday, noho izany ny fivarotana dia tsy maintsy mandeha tsy mihetsika manerana ny fitaovana rehetra.
Fandefasana - Ny vidin'ny fandefasana lafo sy ny fotoana fanaterana maharitra dia hisy fiantraikany amin'ny varotra.
Security - alao antoka fa hivoaka amin'ny taratasy fanamarinana EV SSL ianao rehetra ary hamoaka fanamarinana fanamarinana fanamarinana momba ny fiarovana an'ny antoko fahatelo.
Politika famerenana - avelao ny mpitsidika hahafantatra ny politikanao miverina alohan'ny hividianany.
Serivisy ho an'ny mpanjifa - manolora chat na nomeraon-telefaona hamaly ny fangatahana varotra na serivisy.
Fampahalalana momba ny vokatra feno
Matetika ireo mpitsidika dia tsy vonona ny hividy, tena eo tokoa izy ireo hikaroka. Rehefa manome ny fampahalalana rehetra ilainy ianao, dia azo inoana kokoa fa hanao ny fividianana izy ireo rehefa feno izany.
Product Details - 77% amin'ireo mpanjifa no milaza fa misy fiantraikany amin'ny fanapaha-kevitr'izy ireo ny votoatiny
Fanontaniana sy valiny - Raha tsy eo ny fampahalalana, 40% amin'ireo mpividy an-tserasera no mitady fomba hametrahana fanontaniana sy hahazoana valiny alohan'ny hanaovana fividianana
marina - 42% ny mpanjifa no namerina ny fividianana an-tserasera noho ny vaovao tsy marina ary 86% amin'ireo mpanjifa no milaza fa tsy ho afaka hanao famerenana miverina amin'ny tranokala nividianany azy izy ireo.
Ao amin'ny staoky - Tsy misy mahasosotra kokoa noho ny mankany amin'ny toeram-pisavana alohan'ny hahitanao ny vokatra iray dia lany ny stock. Tazomy ny tranokalanao sy ny valim-pikarohanao havaozina amin'ny sotatotam-bokatra amin'ny alàlan'ny sombin-tsarimihetsika.
Sary, sary, sary
Matetika ireo mpitsidika dia mitady ny antsipirian'ny sary momba ny vokatra satria tsy eo izy ireo hanara-maso azy ireo mivantana. Ny fananana sary mifantina avo lenta dia hamindra fividianana fanampiny.
Sary marobe - 26% amin'ireo mpanjifa no nilaza fa nandao ny fividianana an-tserasera izy ireo noho ny sary ratsy kalitao na sary vitsy loatra.
Fanapahan-kevitra avo - Ny fanolorana ny fahaizana mahita ny antsipirihany voafetra momba ny singa iray amin'ny sary dia manakiana ny mpividy an-tserasera maro.
Zoom - 71% ny mpividy no mampiasa matetika ny fampisehoana zoom-in amin'ny sarin'ny vokatra
Speed - Alao antoka fa voafintina sy alaina avy amin'ny tamba-jotra fandefasana votoaty ny sarinao mba hahazoana antoka fa haingana dia haingana izy ireo. Mety maniry ny handefa sary tsy misy fifantohana (toy ny carousel) aza ianao.
Naoty ary hevitra
Ny fampidirana ny hevitra / naoty tsy miangatra amin'ny tranokalanao dia hanome fomba fijery isan-karazany ary hananganana fahatokisana amin'ireo mpitsidika. Raha ny marina dia 73% ny mpividy no te hahita izay lazain'ny mpividy hafa alohan'ny handraisany fanapahan-kevitra
manavakavaka - Tsy matoky ny isa lavorary ny mpanjifa, mikaroka ny naoty ratsy izy ireo raha hahitana raha hisy fiatraikany amin'ny fanapahan-kevitry ny fividianana ny hevitry ny hafa momba ny vokatra.
Ankolafy fahatelo - 50% ny mpanjifa te-hijery ny hevitry ny vokatra avy amin'ny antoko fahatelo
Isan-karazany - Ireo mpanjifa dia maniry ny hahatsapa ho mahazo aina amin'ny fividianana entana, te ho afaka hitana andraikitra amin'ny orinasa ary te-hahita karazana hevitra isan-karazany izay mifantoka amin'ny kalitao sy ny fiarovana ny vokatra.
snippets - manitatra ny fiasan'ny naotinao sy ny hevitrao amin'ny alàlan'ny sombin-javatra manankarena mba hiseho amin'ny valin'ny fikarohana.
Fikarohana vokatra eto an-toerana
Ny fikarohana eo an-toerana dia manakiana ny traikefa amin'ny e-varotra rehetra. Ho an'ny mpanjifa sasany, ny 71% amin'ireo mpiantsena dia milaza fa mampiasa ny fikarohana matetika izy ireo, ary matetika no zavatra voalohany alehany amin'ny tranonkala iray.
Auto-feno - Manamboara fiasa feno feno feno izay manivana ny anaran'ny vokatra, sokajy sns.
Fikarohana semantisma - Mampiasà fikarohana semantika hahitana valiny tsara kokoa
sivana - 70% amin'ireo mpiantsena no milaza fa manome lanja be ny fahafahany manivana ny vokatra amin'ny alàlan'ny fikarohana ao amin'ny tranonkala
manavaka - Ny fahaizana mandamina ny hevitra, ny varotra ary ny vidiny dia manampy ny mpampiasa hahita ny vokatra tadiaviny.
Breadcrumbs - Ampidiro ireo singa fitetezana, toy ny sombin-mofo ao anaty pejy misy valiny
Valiny amin'ny antsipiriany - Mampisehoa sary sy naoty ao anatin'ny valin'ny karoka
fampitahana - Atolory ny fahafaha-mandinika ireo fiasa momba ny vokatra sy ny vidiny mifanila vidy.
Tags: Auto-fenohiresakampanjifaSerivisy ho an'ny mpanjifae-varotraecomecommercesombin-javatra manankarena ecommercehafainganam-pandehan'ny ecommercemcommercedokam-barotra mdgfifanakalozana findayopengraphfampitahana ny vokatrasivana vokatrafikarohana ny vokatrafanasokajiana vokatrafanontaniana sy valinynaotypolitika famerenanahevitratetikasecurityfikarohana semanticFandefasanatranonkala fikarohanatehinaZoom